Shumaca haysta shumaca & Alaab-qeybiyeyaal - Shiinaha Warshadda shumaca shumaca
Muraayaddan weelka shumaca madhan wuxuu leeyahay saddex cabbir si aad u sameysid shumacyo kala duwan oo muraayad ursan.
Weelka shumaca waxaa loo samayn karaa midabbo badan, waxaad ka dooran kartaa midabka aad ugu jeceshahay kaarka Pantone, waxaanan kuu soo bandhigi karnaa adeeg muunad ah.
Shayga: A07M 、 A08M 、 A09M
Cabbirka: D8.2CM * H9.8CM / D9.2CM * H11CM / D10.2CM * H13.1CM
Qasacadaha 4OZ ee daasadaha birta ah ee lagu sameeyo shumaca
Iyada oo leh jidh wareegsan iyo daboollo bir ah, weelashan daasadda shumaca ayaa ku habboon samaynta shumaca. Intaas waxaa sii dheer, way yar yihiin culeyskooduna miisaan fudud yahay, marka runti waa la qaadan karaa inaad adigu qaadatid. Waad ku shubi kartaa wax soyka ah gasacadahaan, oo waxaad udhigi kartaa laambadaha shumaca DIY, taas oo xiiso leh.
Cabir: D7cm * H4.9cm
Bixi adeeg muunad u ah sameynta shumacyada DIY
Cabbirka: D6CM * H7CM
Dib Loo Isticmaali Karo Jaranjaro & Ujeedooyin Badan - Weelasha dhalada cad waa cabirka prefect ee loo isticmaali karo dhalooyinka dhalooyinka udgoon, weelka geedaha, weelka udgoon, dhalooyinka wax lagu keydiyo containers Weelasha shumaca iyo hadiyadaha kale ee guriga lagu sameeyo haanta hawo qaadka ah. Waxaa loo sameeyay iibso qalabka ugu tayada sareeya adkaysiga iyo sahlanaanta.
Cabir: D10cm * H13cm
Daboolka: daboolka bamboo ama daboolka alwaax
muraayadda matte qabow ee shumaca madhan ee haysta-champagne / Green
muraayadda matte qabow ee haysa shumaca madhan
Bixi adeeg muunad u ah sameynta shumaca
Shayga: A03M / A07M
Cabbirka: D7.2CM * H9.1CMM: D8.2CM * H9.8CM
Kani waa dhalooyinka shumaca dhalaalaya oo leh saddex cabbir oo kala duwan. Buuxin baahiyahaaga xagga awoodaha kala duwan. Waxay caan ku tahay dalal badan waxaana loo isticmaali karaa in lagu sameeyo shumacyo waxna lagu keydiyo. Waxaan u adeegsannaa daboolka bamboo-bey'adeed-saaxiibtinimo si loo wanaajiyo xiritaanka iyo isticmaalka.
Shayga: A03P 、 A06P 、 A07P
Cabbirka: D7.2CM * H9.1CM 、 D11.2CM * H8.7CM 、 D8.2CM * H9.8CM
Midabka: Madow, sidoo kale aqbal midabka la habeeyay
Cabir: D11.2cm * H8.7cm
Shayga: A06P / A07P / A08P / A09P
Cabbirka: D8CM * H8.1CM D9CM * H10CM D10.2CM * H12.5CM D11CM * H8CM
10oz Ku buufin dhalada shumaca dhalada leh oo leh daboolka bamboo-buluug / midab casaan / caddaan + madow
Lagu buufiyay muraayad madow, aqbal kuleylka dabool kala duwan, sida daboolka alwaaxda la xiray, daboolka biraha la qiyaasay.
Waxaan aqbalnaa astaanta gaarka loo leeyahay iyo astaanta xariirta-daabacan sida dalabkaaga. Cabbirka iyo midabka dhammaantood waa la habeyn karaa, oo aad ugu habboon samaynta shumaca DIY.
Cabir: D8.2cm * H9.8cm
Waxaa intaa dheer, dhalooyinka shumaca dhalada waxaa lagu sameyn karaa saameyn kala duwan, sida matte, barafoobay 、 la safeeyey 、 lagu buufinayo. Waxaad dooran kartaa saameynta aad jeceshahay. Dabcan, haddii aad rabto inaad ku daabacdo astaantaada ama sumadahaaga koobka dhalada, sidoo kale waan sameyn karnaa. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad noosoo dirto nashqadahaaga, waxaan kuu sameyn karnaa tixraac ahaan.